ဘားအံမြို့ ယခင် ကားဝင်းဟောင်း မြေနေရာ၌ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆင့်မြင့် ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု တည်? - Yangon Media Group
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ကြာအင်းတောင်ပေါ် လမ်းထောင့်ရှိ မြေဧရိယာ ၃ ဒသမ ၃၄၄ ဧကကျယ်ဝန်းသည့် ယခင်ကားဝင်းဟောင်း မြေနေရာ၌ အများပြည်သူအတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဆောက်အဦအဖြစ် အဆင့်မြင့် ဈေးဝယ်စင်တာ (Shopping Mall) တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် မှန်ကန်မှုရှိစေရေးအတွက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ရာ လာရောက်တင်ပြသည့် ကုမ္ပဏီ ၁ဝ ခုခန့် အနက်မှ ချစ်လင်းမြိုင်အစုအဖွဲ့၊ UHM နှင့် ဂမုန်းပွင့် ကုမ္ပဏီတို့ကို အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၊ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီတို့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပဏာမရွေးချယ်ပြီး အဆိုပြုကုမ္ပဏီများအား မဲနှိုက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များပါဝင်သည့် စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီရှေ့မှောက်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် အချိန် တစ်နာရီကြာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်းကို Presentation တင်ပြစေ၍ အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြကာ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
”ပြည်သူလူထုအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ် ရှိမလဲ၊ အမှန်တကယ်လည်း လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါ့မလား၊ အတွေ့အကြုံရှိလား၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်တာက ကုမ္ပဏီတိုင်း ဆောက်တတ်တယ်။ လူတွေကို ဈေးရောင်းအောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ ပညာက အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အဆောက်အအုံ ဆောက်ထားပြီးတော့ ဘယ်သူမှ ဈေးလာမရောင်းဘူးဆိုရင်လည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ”ဟု ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာ ရေးဝန်ကြီး ဦးသန်းနိုင်ကပြောသည်။
တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီကို ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် မြို့ရွာ စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြန်လည်အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုတည်ဆောက်မည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆင့်မြင့် ဈေးဝယ်စင်တာ (Shopping Mall) သည် ကရင်ပြည်နယ်၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဈေးဝယ်စင်တာ တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ပညာရှင်ကို ဒူတာတေ ဆဲဆို
မန္တလေးမြို့ ချော်ဆိပ်ရပ်ရှိ အငြင်းပွားမြေကွက်ပေါ်တွင် နေထိုင်သောသူများကို ဖမ်းဆီးမှုအပေါ်ေ?
အသတ်ခံလိုက်ရသော မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲမှာ စီအိုင်အေ သတင်းပေးသူဖြစ်??